Ukujonga kweBallard - I-Airbnb
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguJulia
Ibekwe phezulu kwinduli ejonge kwimbali yeFrench Lick Resort kunye neSpa. Isitayile soMyili onomtsalane wasekhaya, umgama wokuhamba ukuya ehotele, ikhasino, kunye nedolophu yaseFrench Lick zokutyela kunye nokuthenga. Ukuhamba okufutshane ukuya ePatoka Lake. Niziphethe kakuhle, bahlobo bam abanoboya bamkelekile.* (jonga 'amanye amanqaku' ngeenkcukacha)
Unokuhlala kwiveranda engaphambili ujingi kwaye wonwabele ikomityi yekofu kusasa. Emva koko unokuhamba edolophini kwaye ujonge iivenkile ezizodwa. Hamba uye kuphonononga ihotele yaseFrench Lick. Ndwendwela Casino. Emva koko thatha itroli uye eWest Baden kwaye ujabulele ubuhle begadi kunye nedome. Yiba nesidlo sangokuhlwa esimnandi kulo naliphi na inani leendawo zokutyela kwiFrench Lick. Ekupheleni kosuku, nwabele ukuhlala kwidesika yangasemva kwaye uphumle. Indawo entle ukonwabela utyelelo lwakho kwiFrench Lick!
4.97 · Izimvo eziyi-222
Eli khaya likwindawo ekhuselekileyo nethe cwaka. Ikwinduli engumnqantsa. Ukuba uhamba ezantsi endulini, ukwidolophu yaseFrench Lick.
Andikho kwindawo, ukuze ube nemfihlo yakho. Ndithumele nje umyalezo okanye ufowune kwaye ndiya kukuvuyela ukuphendula nayiphi na imibuzo, ndinike iingcebiso malunga nento onokuthi uyibone kwaye uyenze kwindawo, okanye uncedo ngazo naziphi na iingxaki onokudibana nazo.
Andikho kwindawo, ukuze ube nemfihlo yakho. Ndithumele nje umyalezo okanye ufowune kwaye ndiya kukuvuyela ukuphendula nayiphi na imibuzo, ndinike iingcebiso malunga nento onokuthi…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- French Lick